Beyle ayaa sheegay in deeq bixiyeyaasha ay joojiyeen kabkii dhaqaale ay ku taageeri jireen… – Hagaag.com
Beyle ayaa sheegay in deeq bixiyeyaasha ay joojiyeen kabkii dhaqaale ay ku taageeri jireen…
Posted on 25 Abriil 2021 by Admin in National // 0 Comments
Wasiirka Maaliyadda Somalia, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in wadamada hodanka ahi ay Dowladda Federaalka ka jareen dhaqaalihii ay ku kabi jireen Miisaaniyadda Qaranka.
Wasiirka ayaa sheegay in deeq bixiyeyaasha ay bishii August ee sanadkii 2020 joojiyeen kabkii dhaqaale ay ku taageeri jireen Miisaaniyadda Dowladda Federaalka.
Wasiirka ayaa dhanka kale sheegay in tan iyo xilligaa ay Dowladda Federaalka bixineysay mushaaraadka, ayna ku bixineysay dhaqaale ay horaan ka heshay Dowladaha Sacuudiga iyo Qatar.
“Lacagihii kabka ee lagu kabi jiray Miisaaniyadda Dowladda waala inaga jaray, waxaana nalaga jaray bishii August ee sanadkii hore. Intaa intii ka dambeysay si’ Allaa ku noolnahay, haddana weli mushaarkii waan bixinaa, waxaana ku bixin jirnay waxyaabo markii hore dalalkaa nooga yimid, sida Sacuudiga iyo Qatar. Waxaas oo dhan way soo dhammaadeen, December iyo January bay ku soo dhamamadeen, maanta sagxadda ayaan ku soconaa.” Ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda.
Wasiirka ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay isku tashi sameeyaan, si looga maarmo kaalmada shisheeye.
“Dalkan waxaa loo baahan yahay inay Soomaali yeelato, wejigaaga iyo sharaftaada waxay tahay marka aad adigu kharashkaga iska bixiso, oo wixii maalgelin ahna aad soo amaahatoo iska bixin doonto, markaasaa nin ragga tahay ama qof dumaroo wax gala tahay.” Ayuu yiri Wasiir Beyle.
“Deeq bixiyeyaashu, Ilaahay baa deeq bixiyee, ma deeq bay iyagu hayaan.” Ayuu yiri Wasiir Beyle oo intaa ku daray “Waa wax loo baahan yahay in laga guuro, laakiin taasi waa sheeko dheer oo waxbarasho, wecyigelin iyo carruurtoo hoosta laga soo bilaabo ayay u baahan tahay.”
Wasiir Beyle ayaa hadalkan ka dhawaajiyay xilli uu madmadow soo kala dhexgalay Dowladda Federaalka iyo saaxiibada caalamka ee Somalia, oo ka horyimid muddo kordhinta uu Golaha Shacabka u sameeyay Hay’adaha Dowladda Federaalka.